मेष : यो महिना तपार्इंको लागी शुभाशुभ मिश्रित फलकारक हुने देखिन्छ। कुलकुटुम्बबाट सुख, सन्तोष मिल्नेछ। यानवाहन, भूमी भवनको योग देखिन्छ। पुत्र-पत्नीबाट सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिनेछ। धर्मकार्यमा मन लाग्नेछ। व्यापारिक क्षेत्रमा परिश्रमले सफलता मिल्नेछ। लुगाफाटा, अन्न-धन्नको क्षेत्र औषधीमूलो जलपान आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय लाभकारी हुनेछ। मानसिक चिन्ताले सताउने देखिन्छ। रोजी रोजगारी, मध्ये व्यापारी सबैप्रकारको काम गर्ने नारी-पुरुषहरूको लागी समय सामान्य रहने साथै 2078 सालको विजयदशमीको शुभकामना साथै शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 1, 3, 4, 9, 13, 14, 19, 20, 24, 28, 30, शुभरंग रातो, अशुभ कालो।
वृष : यो महिना तपार्इंको लागी शुभाशुभ मिश्रित फलकारक हुने देखिन्छ। मेहेनत गर्नेलाई सामान्य अर्थलाभ, व्यक्तित्वको विकास लोकप्रियता बढ्‌ने देखिन्छ। वस्त्र अन्नादिको लाभ सामाजिक र सरकारी नोकरी गर्नेहरूको लागी मानसम्मान, पद-प्रतिष्ठा बढ्‌नेछ। महिनाको मध्य उत्तरार्ध भय रोग, शत्रुभयबाट केही सावधानी पूर्वक अगाड़ी बढ्‌नु पर्नेछ। साझेदारीको काममा वादविवाद हुने योग परेको देखिन्छ। टाढ़ा वा नजिकको यात्रा गर्नुपर्ने यात्राकारी योग छ। रोजी रोजगारी, मध्यव्यापारी, लेखक पाठक, साहित्यकार, शिक्षक-विद्यार्थी आदि रूपियाँ-पैसाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य रहनेछ। 2078 सालको विजय दशमीको शुभकामना सहित होशीयार रहन पर्ने यो महिनाका अशुभ ता. 2, 5, 6, 7, 16, 15, 18, 22, 24, 26, शुभरंग सेतो इन्द्रेणी, अशुभ रातो पहेंलो।
मिथुन : यो महिना तपार्इंको लागी शुभाशुभ मिश्रित फलकारक हुने देखिन्छ। मनमा शुभ विचार आउने व्यापारमा वृद्धि हुने देखिन्छ। कामको व्यस्तताले गर्दा घरपरिवार आफ्ना आफन्तसँग तालमेल नमिल्ने देखिन्छ। चिन्ता, रिस, आवेशमा आएर गरेको निर्णयले पछाड़ी हानी हुनेछ। मेहेनत गरी सोच विचार पुऱ्याएर गरेको काममा लाभ मिल्नेछ। राजनैतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताहरूको लागी मान सम्मान, पदप्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। शत्रुपीड़ा, नेत्र रोगबाट होशीयार। 2078 सालको विजया दशमीको शुभकामनासहित होशीयार रहन पर्ने यो महिनाका अशुभ ता. 1, 6, 9, 16, 17, 21, 24, 29, शुभ रंग हरियो-गहूँ, अशुभ-सेतो, गेरुवा।
कर्कट : यो महिना तपार्इंको लागी शुभाशुभ मिश्रित फलकारक हुनेछ। विनाकारण यात्रा खर्चको बढ़ोत्तरीले पनि चिन्तित बनाउनेछ। आफ्ना आफन्तमा मनमुटाव हुनेछ। धर्मकर्ममा मन लगाउने शंकरा स्तुति पाठ गर्ने गरे केही शान्ति मिल्नेछ। रोजी रोजगारी, मध्येव्यापारी, लेखक, पाठक, साहित्यकार, शिक्षक, विद्यार्थी, नव युवा-युवती, नयाँ दम्पती आदि रूपिया-पैसाको लेनदेन गर्ने सबै वर्गका नारी-पुरुषलाई सामान्य रहने देखिन्छ। 2078 सालको विजया दशमीको शुभकामनासहित शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ताः 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20, 24, 28, 30, शुभरंग सेतो अशुभ पहेंलो।
सिंह : यो महिना तपार्इंको लागी मनको काम पूरा नहुँदा चिन्ताग्रस्त समय देखिन्छ। व्यापारीवर्गको लागी पनि तलमाथि भइरहनेछ। गुप्तशत्रुले कार्य क्षेत्रमा वाधा-ऋृणरोग भयले पनि केही सामान्य चिन्ता बढ़ाउनेछ। महिनाको उत्तरार्धमा केही सुधार आउनेछ। क्रोध नियन्त्रण गरे नयाँ कामको श्रीगणेश हुनेछ। बुद्धिकला कौशलताले गर्दा शत्रु पराजय हुने देखिन्छ। रोजी रोजगारीहरूको लागी केही सुधार अन्न जलपान कपड़ा आदि क्षेत्रमा लाभ घर परिवारमा तालमेलले आत्मीक शान्ति हुनेछ। सबै वर्गको लागी समय सामान्य छ 2078 सालको विजय दशमीको शुभकामना सहित शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 4, 5, 9, 13, 15, 19, 24, 28, 30, शुभ रंग रातो मेरून, अशुभ कालो।
कन्या : यो महिना तपार्इंको लागी रोजीरोजगारीमा केही सुधार आउने, साहसले अगाड़ी बढ्‌ने समय देखिन्छ। कुनै रोकिएको काम अगाड़ी बढ्‌ने देखिन्छ। होशीयार मोजमस्ती, खानपानबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ। बिनाकारण यात्रा ऋृण आफ्ना आफन्तमा झगड़ा हुनेछ। रुपियाँ पैसाको लेनदेनबाट केही बाँच्नुपर्ने स्थिति छ। भूमि, भवन, यानवाहनबाट काम गर्नेहरूको लागी पनि समय होशीयार पूर्वक अगाड़ी बढ्‌नु पर्नेछ। यो महिनाको उत्तरार्धमा कार्य क्षेत्रमा सुधार आउने समय देखिन्छ। कुनै रोकिएको काम अगाड़ी बढ्‌ने देखिन्छ। होशीयार मोजमस्ती खानपानबाट बच्नुपर्ने समय देखिन्छ। विनाकारण यात्रा ऋृण आफ्ना आफन्तमा झगड़ा हुने देखिन्छ। रुपियाँ पैसाको लेनदेनबाट केही बाँच्नु पर्ने स्थिति छ। भूमी भवन, यानवाहनबाट चिट्टापट्टाको क्षेत्रमा कामगर्नेहरूको लागी पनि समय होशीयार पूर्वक अगाड़ी बढ़नु पर्ने देखिन्छ। महिनाको उत्तरार्धमा कार्य क्षेत्रमा सुधार आउने देखिन्छ। 2078 सालको विजय दशमीको शुभकामनासहित होशीयार रहन पर्ने यो महिनाको 3, 5, 10, 11, 18, 20, 23, 27, 29, अशुभ छन्‌, शुभरंग हरियो गहूँ, अशुभ सेतो।
तुला : यो महिना तपार्इंको लागी व्यापारी वर्गको लागी उन्नति प्रगति लाभकारी रहने देखिन्छ। रोगीहरूको लागी केही शान्ति मित्र सम्मान, सन्तान सुख मिल्नेछ। गुप्त शत्रुबाट केही होशीयार रहनुपर्नेछ। नत्र कार्यक्षेत्रमा वाधा धन हानी हुने समय देखिन्छ। वाणीमा कठोरताले गर्दा केही सामान्य हानी पनि हुनेछ। नारी वर्गलाई मात्र सुख मिल्नेछ। नव युवा-युवतीलाई जीवनसाथी मिल्नेछ। रोजी रोजगारी, मध्यव्यापारी, यानवाहन, भूमी भवन, रुपियाँ-पैसाको लेनदेन गर्नेहरूको लागी समय सामान्य रहनेछ। 2078 सालको विजया दशमीको शुभकामना सहित शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 1, 3, 9, 15, 16, 21, 22, 26, 30, शुभरंग इन्द्रेणी सेतो, अशुभ पहेंलो।
वृश्चिक : यो महिना तपार्इंको लागी शुभाशुभ मिश्रित फलकारक हुनेछ। पत्नी सन्तानमा केही मतभेदको स्थिति हुनेछ। रोजी रोजगारमा केही अड्‌चन आउनेछ। भोजन सयनमा केही तलमाथिले गर्दा केही शरीरमा रोग भय हुने योग देखिन्छ। कृषी क्षेत्रमा कामगर्ने कृषक, व्यापारीहरूको लागी लाभकारी समय देखिन्छ। यानवाहन आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी पनि समय लाभकारी छ। समय यात्राकारी पनि छ। लाभकारी पनि छ। सबै वर्गकाहरूको लागी सामान्य छ। 2078 सालको विजया दशमीको शुभकामना साथै शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ताः 2, 3, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 22, 23, 28 शुभरंग रातो-मेरून, अशुभ पहेंलो।
धनु : यो महिना तपार्इंको लागी आफ्ना आफन्त घरपरिवारमा मतभेद हुनेछ। शत्रुभय रोग, ऋृण आदिले सताउनेछ। महिनाको मध्यउत्तरार्धमा धन लाभ मिल्नेछ। ठूलावड़ाको संगतले रोकिएको काम बन्नेछ। वस्त्र साथै गहनादिको योग छ। व्यापारिक क्षेत्रमा लोकप्रियता बढ़ने साथै लाभ मिल्नेछ। दान धर्ममा मन लगाए अवश्य लाभ मिल्नेछ। रोजी रोजगारी, मध्येव्यापारी, लेखक पाठक, साहित्यकार, जलपान, रुपियाँ-पैसाको कारोबारीहरूको लागी समय सामान्य भन्दा लाभकारी देखिन्छ। 2078 सालको विजय दशमीको शुभकामना सहित होशीयार रहने यो महिनाका अशुभ ता. 1, 4, 5, 11, 12, 16, 20, 24, 28, शुभरंग पहेंलो, गेरुवा अशुभ कालो।
मकर : यो महिना तपार्इंको लागी व्यापारी वर्गको लागी लाभ मिल्नेछ। रोजी रोजगारमा लाभ मिल्नेछ। होशीयार धेरै जोश गरी नसोंची कार्य गरेमा हानी हुने समय देखिन्छ। घर परिवारमा आपसी तामेल नहुने कारण शारीरिक कष्ट उदर रोग हुनेछ सरकारी नोकरी सामाजिक कार्यकर्ताहरूको लागी मानसम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ्‌ने समय देखिन्छ। रोजी रोजगारी, मध्ये उद्योग व्यापारी, औषधीमूलो, लेखक, पाठक, साहित्यकार आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य रहने देखिन्छ। 2078 सालको विजया दशमी शुभ दिपावलीको शुभकामना साथै शुभकालको लागी यो महिनाका शुभ ता. 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 25, 27, 29, शुभरंग निलो आकाशे, अशुभ रातो-पहेंलो।
कुम्भ : यो महिना तपार्इंको लागी लाभकारी समय देखिन्छ। पारिवारिक व्यावसायिक क्षेत्रमा तालमेल बनाइ राख्नु लाभकारी हुनेछ। कार्य क्षेत्रमा महिलाहरूको सहायताले लाभ मिल्नेछ। टाढ़ा नजिक यात्रा गर्नुपर्ने यात्राकारी योग परेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा रोकिएको काम अगाड़ी बढ्‌ने समय देखिन्छ। सरकारी नोकरी गर्नेहरूको लागी लाभ मिल्नेछ। रोजी रोजगारी, मध्ये व्यापारी, यानवाहन, भूमी भवन आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय शुभ छ। पण्डित पुरोहित, साधु-सन्त, योगी, महन्त लेखक, पाठक, साहित्यकार नव युवायुवती, गृहस्थी नयाँ दम्पती आदिमा पनि समय सामान्य रहने देखिन्छ। 2078 सालको विजया दशमी शुभ दिपावलीको शुभकामना सहित यो महिनाका शुभ ता. 4, 5, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 28, 30, शुभरंग कालो-मैले, अशुभ गेरुवा रातो।
मिन : यो महिना तपार्इंको लागी शुभाशुभ मिश्रित फलकारक हुनेछ। रोगी विमारीहरूको लागी केही समय सताउनेछ। रोजगारी क्षेत्रमा सामान्य लाभ मिल्नेछ। भाग्यले केही नयाँ काम हुने समय देखिन्छ। मनमा शुभ विचारको उदय हुनेछ। जज, वकिल, प्रशासकहरूको निर्णय र कानुनी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी निर्णायक क्षेत्रमा बढ्‌ने साथै लाभ मिल्ने समय देखिन्छ। नव युवा-युवतीको लागी जीवनसाथी मिल्ने योग देखिन्छ। नव दम्पतीलाई सन्तान सुख मिल्नेछ। पत्नी, पुत्र, ससुराली तर्फबाट केही रोकिएको काम अगाड़ी बढ्‌ने छ। रोजी रोजगारी, मध्येव्यापारी, लेखक आदि कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य रहनेछ। 2078 सालको विजया दशमीको शुभकामनासहित यो महिनाका शुभ ताः 2, 4, 6, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 26, 30, शुभ रंग पहेंलो, गेरुवा अशुभ कालो।
02बञ्जरभूमीमा गोर्खाहरू छ पूर्वोत्तर भारतको सन्दर्भमा
03मेष : यो महिना तपार्इंको लागी शुभाशुभ मिश्रित फलकारक हुने देखिन्छ। कुलकुटुम्बबाट सुख, सन्तोष मिल्नेछ
04‘लिटल एञ्जेल’-का ‘लिटल च्याम्प’ दीपक न्यौपाने
16 20:06:13 Oct 2021